Ukuhlolwa Kokukhipha Ingxenye, Ukuhlolwa Kwe-Transformer, Ukuhlolwa Kokushisisa Kawoyela - Ukuhlola Ukuqalisa
Iguqula i-Ratio Tester
I-DC Resistance Tester
I-Tan Delta Tester
Isihloli Sokuvinjelwa Kwesekethe Esifushane
Isihlaziyi Sempendulo Yemvamisa Yokushanela
I-CT PT Analyzer
KuLayisha Tap Changer Tester
I-Ligtning Arrester Tester
I-Capacitance kanye ne-Inductance Tester
Ukuhlola Amafutha e-Transformer
I-Oil BDV Tester
I-Oil Tan Delta Tester
I-Flash Point Tester
I-Oil Acid Value Tester
I-Oil Water-Soluble Acid Tester
I-Oil Chromatograph Analyzer
I-Kinematic Viscosity Tester
Uwoyela Distillation Range Tester
I-Oil Interfacial Tension Tester
Landelela Umhloli Womswakama
Ukuhlolwa kokuvikela kwe-Relay
Ikhithi Yokuhlola Yesigaba Ezintathu
Ikhithi Yokuhlola Isigaba Esiyisithupha
I-Insulation Resiatance Tester
I-Circuir Breaker Analyzer
Xhumana noMhloli Wokumelana
Ijeneretha Yamanje Eyisisekelo
Ukuhlolwa Kokukhipha Ingxenye
Indawo Yephutha Lekhebula
I-Power Quality Analyzer
I-SF6 Gas Analyzer
I-Ultra Low Frequency
Isethi yokuhlolwa kwe-Vlf hipot ifaneleka ngokukhethekile ukuhlolwa kwe-voltage eqinile yezinto zikagesi
5Kv ohlakaniphile high-voltage ukwahlukanisa umhloli
Ngobubanzi obu-4: 500V, 1000V, 2500V, 5000V, ukuhlolwa okuphezulu kungafinyelela ku-2TΩ
Umsebenzi wokuvikela ophelele kanye nokusebenza okuhle kakhulu kokulwa nokuphazamiseka
Izisetshenziswa zokuhlola zikagesi
Yenza Ukuhlolwa Kwakho kube lula
Ukukhetha nokumisa ithuluzi lokuhlola elilungile,
qinisekisa ukusebenza okuphephile nokuzinzile kwesistimu yamandla.
Ukuhlolwa Kwephutha Lekhebula
Ukuhlaziywa Kwegesi kwe-SF6
I-Automatic Pensky-Martens Iphuzu Le-Flash Point...
I-Automatic Closed Cup Fla...
Umhloli wokumelana nomhlaba wedijithali osebenza ngezinto eziningi
I-Factory Price Digital Ea...
I-Transformer Tan Delta kanye Nokulinganisa Amandla...
I-Automatic Transformer Po...
0-80kv Isihloli Samafutha e-Bdv sekhefu le-Transformer Amafutha...
Umkhiqizi Portable Tr...
I-Transformer Iguqula I-Ratio Tester DC Winding Resis...
I-10A DC Resistance Tester ye-Transformer Windin...
Isigaba Sesithathu Sokuvikela Ukuhlolwa Kwedluliselwe Kwesibili...
I-Microcomputer 3 Phase Se...
Inkampani kagesi ye-RUN-TEST inochwepheshe abachwepheshile abangaphendula imibuzo yakho mayelana nemishini yokuhlola. Isitifiketi esiqinisekisiwe sokukunikeza ukwethemba. Isevisi ye-inthanethi yamahora angu-24 ukuhlangabezana nezidingo zakho. Umgomo wethu uwukusebenzisa okokusebenza kwethu kokuhlola ugesi ukwenza umsebenzi wakho uphumelele futhi uphephe.
Ngesikhathi sokuza konyaka omusha, egameni le-RUN TEST Company, ngithanda ukudlulisa ukubonga kwami ​​okusuka enhliziyweni nezilokotho ezinhle kubasebenzisi abasha nabadala abebelokhu bethemba, besekela futhi besiza intuthuko yenkampani yethu! Inkampani yethu iphinde yathuthukisa futhi yandisa imikhiqizo eminingi emisha...
NgoNovemba, inkampani ye-Run-Test yenza ukuthuthukiswa okuphelele kwamabhokisi okhuni anegwebu ngaphakathi, okwenza amabhokisi okhuni athuthukisiwe avumelane nemvelo, amahle, aphephile futhi asebenzisekayo. Sihlanganisa kabusha imishini yokuhlola kagesi ngokwezindlela ezahlukene...
Ukuthengisa okukhulu kwezinsimbi zokuhlola Okushisayo
Ingabe usazithola izisetshenziswa zokuhlola zikagesi ezithembekile ukuze wenze ukuhlola kwakho? senza imisebenzi yokuphromotha yezinto zokuhlola, okuhlanganisa abahloli be-transformer, abahloli bokumelana nokuxhumana, ikhithi yokuhlola edluliselwe, i-circuit breaker analyzer kanye nesihloli sikawoyela we-transformer. Ukukhuthaza i-s...
Isakhiwo sesi-4, i-Dongrun Science Park, i-High-Tech Zone, i-Baoding, i-Hebei, i-China